Mifananidzo mitsva yemamaboardboard eiyo iPhone 7 inoratidza shanduko diki | IPhone nhau
Nyowani iPhone 7 mamaboard mifananidzo anoratidza zvishoma shanduko
Nezuro, mumwe wangu Miguel yakabudiswa chinyorwa chakaratidza pikicha reiyo mamaboard e iPhone 7. Nhasi uno mimwe mifananidzo yakawanda yakaonekwa uye kunyangwe vhidhiyo inoenzanisa iyo iPhone 7 mamaboardboard (kurudyi) nebhodhi reamai reiyo iPhone 6s (kuruboshwe). Vhidhiyo iyi yatimaka negirazi rinokudza misiyano iri pakati pemahwendefa ese kunyangwe, pakutanga nekumirira kuti zvinhu zviwedzerwe, hatigone kuvimbisa kuti shanduko idzi dzakakosha kwazvo.
Ramba uchifunga kuti aya mamaboardboard achiripo zvinhu zvizhinji zvinoshaikwa. Muchokwadi, zvinoita sekunge iko chete chinhu chakakwana, mukushaikwa kwekudzivirira, ndiye SIM kadhi muverengi. Pamabhodhi aya vanofanirwa kuisa zvinhu senge processor, RAM, uye memory memory.
IPhone 6s mamaboard vs. iPhone 7 mamaboardboard
Iko kunokosheswa kuti kuchavepo misiyano iri mukamera uye sensors. Kuti maburi haasi munzvimbo imwechete pachikamu chakatwasuka inoratidza kuti kamera inoshandisa iyi mamaboard ichave saizi yakasiyana. Chii pakati isu hatisi kuona chidimbu chidiki chakamira Ngatione chimedu chakakura chakamira muchikamu chino (ona mifananidzo) inoratidza kuti kuchave nekuchinja munzvimbo iyoyo. Zvinoenderana nekudonha, imwe yema sensors ari kumberi kweiyo iPhone 7 ichatamiswa uye, pachinzvimbo chekuve kuruboshwe kwegomba riri pamusoro peyezeve, iyo sensor itsva ichave kurudyi.
Imwe yeshanduko inosvika neiyo iPhone 7 ichave imba hombe kuti dzimwe runyerekupe dzinovimbisa kuti ichave 21Mpx. Iyo 9.7-inch iPad Pro yakauya neChokwadi Tone skrini, sisitimu inoongorora iyo nharaunda yenzvimbo yedu kuratidza mufananidzo unoenderana uye unoita kuti titemese maziso edu zvishoma. Iyi skrini ingangoita nzira yayo kune iyo iPhone 7 futi.
Kune zvese zvimwe zvinhu, zvinotarisirwa kuti pamahwendefa aya vanoisa iyo A10 processor pamwe chete neiyi shamwari M10, 2GB ye RAM (3GB mune iyo Plus modhi) uye, pamwe, pachave nemhando ine 256GB yekuchengetedza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone Zviteshi » iPhone 7 » Nyowani iPhone 7 mamaboard mifananidzo anoratidza zvishoma shanduko
Google inosekesa iyo 16 GB iPhone kusimudzira Google Mifananidzo